नेपाली नेताको रवैयाले भारतीय नेताहरु दुखि छन् | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » नेपाली नेताको रवैयाले भारतीय नेताहरु दुखि छन्
नेपाली नेताको रवैयाले भारतीय नेताहरु दुखि छन्
महासचिव, तराई मधेश विद्यार्थी फ्रन्ट
तराई मधेश विद्यार्थी फ्रन्टका महासचिव मनिषकुमार मिश्रा हालै भारत गएर भारतका विभिन्न दलका नेताहरुलाई भेटेर मधेश आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ र मधेशप्रति भारतको सोच बारेमा पनि बुझेर आउनु भएको छ । भारत भ्रमणमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बीपी यादव पनि हुुनुहुन्थ्यो । भेटको क्रममा के के कुरा भयो, नेपालप्रति भारतको के बुझाई छ लगायतका विषयमा मिश्रासँग सहाराटाइम्सले गरेको छोटो कुराकानीः
तपाई केही दिन पहिले भारतको दिल्ली हुँदै विभिन्न राज्य घुमेर आउनु भयो, खासमा भारत जानुको उद्देश्य के थियो ?
–खासमा भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा भारत जाने इच्छा पनि थिएन । आन्दोलन चलिरहेको बेला आन्दोलन छाडेर उता जाने फूर्सद थिएन तर उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत भ्रमणबाट फर्केपछि उहाँले भारतको विभिन्न तथ्यहिन कुराहरु यहाँ राख्नु भएको थियो । भारतले नाकाबन्दी खोलि दिने रे । मधेशवादी दलले आन्दोलन गर्न छाडि दिन्छ रे जस्ता अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । जुन कुरा हामीलाई निकै छोएको थियो । नाकाबन्दी हामी मधेशीले गरेका हौ । भारतले कसरी नाकाबन्दी खोलाई दिन्छ भन्ने लागेर त्यही कुराहरु बुझ्नका लागि हामी भारत भ्रमणमा गएका थियौ । मधेश आन्दोलन तथा यसको यथार्थ र नेपाल सरकारले गरेको व्यवहारको बारेमा जानकारी गराउन हामी भारत गएका थियौं । कमल थापाले भारत आएर के के कुरा गर्नु भएको थियो र के के कुरा गरेर जानु भएको बारेमा त्यहाँका विभिन्न नेताहरुसँग बुझ्ने प्रयास पनि गर्यौं ।
मधेशवादी दलको नेताको हैसियतामा त्यहाँ जानु भएको थियो कि व्यक्तिगत रुपमा त्यहाँ जानु भएको थियो ?
–हुन त हामी व्यक्तिगत ढंगबाट नै त्यहाँ गएका थियौं तर हामी गएको कुरा पार्टीलाई थाह थियो । पक्कै पनि हामी मधेशवादी भएको कारणले त्यहाँ मधेशकै प्रतिनिधि भएर गएको पनि बुझ्दा हुन्छ ।
के के कुरा भयो त्यहाँ ?
–हामीले त्यहाँ दुईटा कुरा गर्यौं र उहाँहरुले पनि दुईटा कुरामा चासो राख्नु भयो । भारतले नेपाललाई यतिका सहयोग गरेपनि नेपालले भारतसँग गरेको व्यवहार र मधेश आन्दोलनको बारेमा उहाँहरुले चासो लिनु भएको छ । भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको आरोप जसरी नेपालले भारतलाई आरोप लगाई रहेका छन् त्यसले भारतका नेताहरु निकै दुखि रहेका छन् । भारतीय नेताहरुले नेपालको आरोपप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । हामीले पनि प्रष्टसँग कुरा राख्यौ कि नेपाल भारतको सीमामा मधेशी जनताले नाकाबन्दी गरेका छन् । नेपालले लगाएको आरोप एकदमै गलत हो । यदि नाकाबन्दीलाई वा मधेश आन्दोलनलाई लिएर यदि तपाईहरुसँग कोही वार्ता गर्न आउँछन् भने सिधै भन्नुस् वार्ता मधेशी मोर्चासँग गर्नुस् । हामीले नेपालमा आन्दोलन आफ्नो अधिकारका लागि गरिरहेका छौ तर नेपाल सरकारले हामीमाथि ठूलो दमन गरेको छ । आन्दोलनकारीहरुलाई सिधै टाउकोमा गोली हानेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकालाई यसरी गोली हानिदैन । यसप्रकारको गाली आतकंकारीलाई हान्ने गरिन्छ तर हामीसँग आतंककारीभन्दा नराम्रो व्यवहार राज्यले गरिरहेको छ त्यसैले तपाईहरु नेपाल सरकारसँग कुनै प्रकारको वार्ता नगर्र्नुस् वार्ता हामीसँग हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु भनियौ ।
यी कुराहरु राखेपछि उहाँहरुको प्रतिकृया के थियो ?
–उहाँहरु पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ कि मधेशमा मधेशी जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन् । सविधान निर्माणपछि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो अधिकारका लागि मधेशी जनता मधेशमा संघर्ष गरिरहेका छन् भने कुरा उहाँहरुले प्रष्ट रुपमा बुझेका छन् । यो आन्दोलन आजको होइन । मधेशी जनताले सदियौंदेखि सहदै आएको विभेदको नतिजा यो आन्दोलन भएको हो । हुन त पहिलादेखि नै मधेशी जनता आन्दोलन गर्दै आएका थिए तर त्यो त्यति प्रभावकारी भएका थिएन अहिले आएर अलि योजनवद्ध र कडा रुपमा मधेशी जनता सडकमा ओर्लेका छन् । रामजनम चोधरी, वेदानन्द झा, दुर्गा नन्द चौधरी, गजेन्द्रनारायण सिहकै पालादेखि आन्दोलन हुँदै आएका थिए तर अहिले आएर मधेशी जनता अलि सचेत भएका छन् र आफ्ना अधिकारका लागि सडकमा आएका छन् । यी सबै कुरा उहाँहरुलाई थाह छ । मधेशमा भएको आन्दोनल जायज हो र यो आन्दोलनलाई राज्यबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भनि उहाँहरुले चाहनु भएको छ ।
भारतले नै नाकाबन्दी गरेको हो तथा मधेशमा भारतले नै आन्दोलन गराएका हो भने कुरा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमै भन्दै आएका छन् यस बारेमा उहाँहरुको धारणा के छ ?
–भारतका नेताहरु यो कुराबाट निकै दुखि हुनुहुन्छ । नखाएको वीष लागेको उहाँहरुले भन्नु भएको छ । नाकाबन्दीमा भारतको कुनै रुपमा संलग्नता छैन । हुनसक्छ नेपाल भारतको बेटी रोटीको सम्बन्धले गर्दा कसैको मामा सहभागि भएको होला कसैको भन्जा सहभागि भएको होला । अरु कोही व्यक्ति रुपमा सहभागि भएको होला तर भारतको यसमा दुर दुर कुने संलग्नता छैन । भारत पूरै नेपालको पक्षमा छ । मधेशपनि नेपालमै हो । नेपालको सबै नागरिक बराबरको हक पाउनुपर्छ भने पक्षमा भारतका नेताहरु हुनुहुन्छ तर नेपालले मधेशको आन्दोलनमा जवर्जस्ती घिसारेर ल्याइरहेका छन् । हामीले नेपाललाई यतिका सहयोग गर्दा त्यसबेला नेपाली जनताले कहिले बोल्नु भएन कि किन यस्तो सहयोग गरेको हो । सहयोग गर्दा वाहवाही गरेका थिए तर आज मधेश आन्दोलनसँग जोडेर हामीलाई दोषी देखाई रहेका छन् जुन सरासर गलत हो । नेपालका नेताहरुले हामीलाई भनि रहेका छन् नाकाबन्दी खोलाई दिनु । एसएसबी लगाएर भएपनि, मधेशी जनतालाई कुटेर भएपनि नाकाबन्दी खोलाई दिनु भनेका छन् जुन हाम्रो बसको कुरा होइन । हामी सक्दै सक्दैनौ । हामीले गरेकै छैनौ भने कसरी खुलाउने ? यो कुरा नेपाली नेताहरुले बुझ्नु पर्ने हो भनि उहाँहरुले भन्नुभयो ।
आन्दोलन चलिरहकै बेला यसरी भारत गएर त्यहाँका नेताहरुलाई भेट्नुले मधेश आन्दोलनका लागि सहयोग माग्न गएको हो भनि पुष्टि हुँदैन त ?
–मधेशमा जुन आन्दोलन भएका छन् त्यसले सबभन्दा समस्या भारतलाई परेको छ । किनभने आन्दोलन हामीले गरेका छौ गाली भारतले खानु परिरहेको छ । हामी यस कुरामा एक्स्यूज गरियौं कि आन्दोलन हामीले गरिरहेका छौ गाली तपाईहरुले खाई रहनु भएको छ । तर, केही छैन सत्य सत्य नै हुन्छ । मधेशी जनताले सत्यको लडाई लडि रहेको छ भने मधेशी जनताको लागि तपाईहरु गाली खानु हुन्छ यो कुरा मधेशी जनताले कहिले विर्सिने छैने भनेका छौ । हामी कुनै सहयोग माग्न गएका होइन । नेपालले भारतसँग अहिले जुन व्यवहार गरिरहेको छ त्यसको बारेमा बुझ्न र असली कुराको जानकारी गराउन गएका हौं ।
ककसलाई भेट्नु भयो ?
–हामी सरकारका नेतृत्व गरेका दलका नेता तथा प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरुलाई भेटको छौ । काँग्रेसका करण सिहदेखि लिएर भाजपाका भगतसिह कौसियारीसम्मका लागि भेटेका छौ । त्यस्तै विजय जोली, डिवी त्रिपाठी, अखलेस यादवलगायत विभिन्न कुटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरुलाई पनि भेटका छौ ।
प्रतिपक्षमा बस्ने नेताहरुको मधेश आन्दोलनप्रति कस्तो धारणा पाउनु भयो ?
–काँग्रेस (आई) का नेताहरु पनि मधेश आन्दोलनप्रति निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ । मधेशीले सविधानमा अधिकार पाउनु पर्छ भनि चाहेका छन् । उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री अखलेश यादवलाई पनि भेटेका छौ उहाँ पनि मधेशी जनताले उठाएको माग जायज हो । ती मागहरु पाउनु पर्छ । आफूहरुको नैतिक समर्थन रहेको पनि भन्नुभयो ।
काँग्रेस (आई) ले त मोदी सरकारले नेपाल भारतको सम्बन्ध विगारि रहेको आरोप लगाएका छन् नि ?
–काँग्रेसका नेताहरुसँग कुरा गर्दा हामीले त्यस्तो कुरा पाएका छैनौ । उहाँहरुले कहि कतै मधेश आन्दोलन वा नेपालको समस्यामा भाजपालाई दोष देखाउनु भएको छैन । दलहरुको आन्तरिक कुरा के हुन्छ त्यो त हामीलाई थाह भएन तर हामीसँग कुरा गर्दा कसैले पनि भाजपा सरकारको विरोध गर्नुभएन । बरु उहाँहरुले नेपालको आन्तरिक मामला हामीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन पनि भन्नुभयो तर मधेश पनि अधिकारबाट बन्चित रहनु हुँदैन पनि भन्नुभयो । हुनसक्छ विहारमा चुनावको बेला दलहरुले एक अर्कालाई गाली गरेका होला, त्यो म भन्न सक्दिन तर हामीसँग कुरा गर्दा उहाँहरुले मधेशप्रति एकदमै पोजेटिभ कुरा गर्नुभयो । रियलमा हामीसँग कुरा गर्दा कसैले पनि कसैलाई गाली वा विरोध गरेको छैन बरु नेपालमा देखिएको समस्या चाँडो कसरी समाधान हुन्छ भने कुरामा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।
तपाई मधेशमा आन्दोलन जारी रहेकै बेलामा भारत जानु भयो त्यहाँ विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेट्नु भयो । नेपालको कुरा र भारतको कुरा सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो सुलुशोन कहिले निस्किन्छ ?
–नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो र भारत पनि लोकतान्त्रिक देश हो तर मधेशी कहिल्यै पनि कम्यूनिष्ट हुन सक्दैन । मधेशी जनता लोकतान्त्रिक समुदाय हो । मधेशी जनता समाजमा विश्वास गर्छन् । आफ्नो समुदायमा विश्वास गर्छन । नेपालमा भारतको जुन विरोध भइरहेको छ त्यो केही व्यक्तिको म्यान्टेलिटी हो । खासगरि एमाले र एमाओवादीले यसको विरोध गरिरहेका छन् । भारतप्रति नेपाली जनताको विरोधी सेन्टीमेन्ट छैन तर केही नेताहरुले ती सोझा सिधा जनतालाई उचाल्ने काम गरिरहेका छन् । कहिले काही चाइनालाई देखाएर भारतसँग ब्ल्याकमेल गरिरहेका छन् भने कहिले काही भारतलाई देखाएर चीनसँग ब्ल्याकमेल गरिरहेका हुन्छन । यो कुरा दुवै देशले बुझ्नु पर्छ । हामीले आफ्नो अधिकारका लागि नाकाबन्दी गरेका छौ तर चीनले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् के यो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप होइन ? चीनले मधेशीको विरोधमा सहयोग गरिरहेका छन् । यो एकदमै गलत हो । चीनको जुन गतिविधि नेपालमा छ त्यसले तराई मधेशको समस्या समाधान हुँदैन । अर्थात मधेशको समस्या समाधान होस् भने कुरामा नेपाल सरकारको नियतै ठिक छैन । नेपालमा नेपालीले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यो कुरा नबुझेसम्म सुलोशन निस्किदैन ।
विहारमा हिजै चुनावको परिणाम आएको छ त्यसमा भाजपाको नराम्री पराजय भएको छ । त्यसले यहाँ काठमाडौवासी खुशीयाली मनाई रहेका छन् । के मोदीको पार्टी हार्दैमा मधेश आन्दोलन बन्द हुन्छ वा नाकाबन्दी हट्छ त ?
–पहिलो कुरा त मधेशी जनताले गरेको नाकाबन्दी र विहारको चुनावसँग कुनै तालमेल छैन । र मोदीको पार्टी हार्दैमा मधेशमा आन्दोलनमा कुनै असर पर्दैनन् किनभने भारतको नेपाल नीति केन्द्रबाट निर्माण हुन्छ विहारबाट होइन । नेपालप्रति भारतको जस्तो नीति छ त्यस्तो रहन्छ नै विहारको चुनावले कुनै असर गर्दैनन् । काठमाडौवासीको क्षणिक खुशीयाली हो । फेरि दुखको दिन चाँडै आउँछन् ।